Intsingiselo yeMfundo yaBantwana abaDala
Phawu: uyilo lwamacala amabini
I-Acc: Umtya wenkcubeko kunye nelogo yesiko eprintiweyo
Inkqubo yobugcisa: ukubumba, ukufa, ukupholisha, ukugoba, i-QC, indibano, ukupakisha.
Bungcibi bokuphosa, akukho wawu
Siyakholelwa ukuba intsebenziswano yokubonisa ixesha elide ihlala isisiphumo esikumgangatho ophezulu, uncedo olongeziweyo, ukudibana okutyebileyo kunye nonxibelelwano lobuqu kwiXabiso leVenkile yeChina China Longzhiyu Iminyaka eli-13 yoMvelisi oGqwesileyo wokuDada iMedali yeMbasa yeziDanga ngeMbasa yeAlicrylic, Abathengi bethu bahanjiswa ikakhulu ngelixa eMntla Melika, eAfrika naseMpuma Yurophu. Siyakwazi ukubonelela ngeempahla ezikumgangatho ophezulu ngazo zonke ixabiso elihle.
Ixabiso leVenkile yeTshayina kunye nexabiso lokuDada, ixabiso lethu "kukunyaniseka kuqala, eyona nto ilungileyo". Sinethemba lokukubonelela ngenkonzo ebalaseleyo kunye nezisombululo ezifanelekileyo. Sinethemba lokuba singasungula intsebenziswano yokuphumelela kwishishini kunye nawe kwixa elizayo!
Egqithileyo Iimbasa zeBhola yeBhola ekhatywayo yesiqhelo
Okulandelayo: Imbasa yeMall Marathon eQhelekileyo yokuSebenza kweMidlalo
Iimbasa ezi-5k ezibalekayo
Ukubonisa iiMedali ezibalekayo
Iimbasa zegolide zeSilivere zeBronzi
Iimbasa zeBhola yeBhola ekhatywayo yesiqhelo
Uyilo oluCwangcisiweyo lwe-2D ye-3D yenziwa e China
Uyilo oluqhelekileyo lweeMedali ezibalekayo kunye neLanyard